Mahaiza Mandamin-javatra | Ahoana no Andraisan-tsoa Amin’ny Fianarana?
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Cebuano Chichewa Cinghalais Danoà Espaniola Failandey Frantsay Grika Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kinyarwanda Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Norvezianina Poloney Portogey (Brezila) Romanianina Rosianina Serba (Sirilika) Sesotho (Lesotho) Setswana Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tiorka Tseky Tsonga Xhosa Zoloa
Handray soa be dia be ianao raha miezaka kely mandamina an’izay ataonao. Hanam-potoana kokoa sy tsy dia hiady saina ianao ary ho tsara naoty.
AHOANA raha hividy zavatra iray ao amin’ny fivarotana lehibe ianao, nefa mikorontana ambony ambany ny entana ao? Tsy ho lany fotoana hitady an’ilay izy ve ianao? Tsy ho tsara kokoa ve raha milamina tsara ny entana ary misy soratra mampahafantatra ny toerana ahitana azy? Ilaina koa ny mahay mandamin-javatra rehefa mianatra. Ireto misy soso-kevitra:
Hoy i Zachary, ankizilahy 18 taona avy any Etazonia: “Efa nisy fotoana aho nanadino tanteraka ny devoarako sady tsy nahavita raharaha, fa tany amin’ny namako nandritra ny faran’ny herinandro. Niangaviako ny mpampianatra nony tonga ny alatsinainy, mba hanome ahy fotoana hanaovana devoara. Ataoko lisitra izao ny zavatra ataoko ka tsy misy hadinoko.”
Hoy koa i Celestine, any Papouasie-Nouvelle-Guinée: “Nosoratako tao anaty fandaharam-potoanako daholo ny zavatra nataoko, toy ny devoara sy fanadinana ary fety. Amin’izay hitako hoe inona no lehibe kokoa, ka vitako ara-potoana ny zava-drehetra.”
Soso-kevitra: Ataovy lisitra ny zavatra tokony hataonao, ka soraty amin’ny karine, taratasy kely, telefaonina, na zavatra hafa.
Aza mangataka andro.
Mora erỳ ny milaza hoe: “Hataoko io rehefa avy eo.” Tsara kokoa anefa raha vitaina haingana ny zavatra tokony hatao, indrindra fa ny devoara.
Soso-kevitra: Miezaha hanao devoara raha vao tonga ao an-trano, dieny mbola tsy mijery tele na manao fialam-boly hafa.
Ampirimo mialoha ny fitaovam-pianarana.
Ahoana raha efa any am-pianarana ianao vao mahita hoe hadino ny kahie, stylo, na boky? Ahoana no hisorohana an’izany? Hoy i Aung Myat, tovolahy any Myanmar: “Ampirimiko mialoha foana ny fitaovana entiko mianatra.”
Soso-kevitra: Alamino tsara ny fitaovana ao anaty kitaponao mba ho mora tadiavina.
Fehiny: Mahaiza mandamin-javatra, dia tsy hanadinodino zavatra ianao, tsy ho tara, ary hanam-potoana hanaovana ny zavatra hafa tokony hatao.
Izao atao: Eritrereto hoe inona no zavatra tokony halaminao? Mitadiava fanampiana amin’ny ray na reny na namanao avy eo.
Misy soso-kevitra hanampy anao tsy hangataka andro ato.
Hizara Hizara Mahaiza Mandamin-javatra
Ahoana no Andraisan-tsoa Amin’ny Fianarana?—Mahaiza Mandamin-javatra